Naya Post Nepal | उमेर नपुग्दै कपाल फुल्यो ? यी हुन् ठिक पार्ने ७ अ’चुक उपाय
उमेर नपुग्दै कपाल फुल्यो ? यी हुन् ठिक पार्ने ७ अ’चुक उपाय
काठमाडौँ । के तपाइँको उमेर नपुगी युवा अवस्थामै कपाल फु’ल्ने स”मस्याबाट हैरान हुनुभएको छ ? छ भने अब चि’न्ता नलिनुहोस् त्यसलाई घरमै उ’पचार गर्न सकिने छ। कालो कपालले मानिसको सुन्दरता अ’झै बढाउँछ । तसर्थ युवा उमेरमै कपाल फु’ल्ने स’मस्या बाट छु’टकारा पाउन यी सजिला घरेलु उपाय अपनाउनुस्।
१. अमला : कपाल फुल्ने स’मस्याको उपचारका लागि अमला एक उत्तम उ’पाय हो । नरिवलको तेलमा सुकेको अमलाका केही टु’क्रा मिसाएर आगोमा उमाल्नुस् । र तेल चिसिएपछि त्यसलाई आफ्नो कपाल र टाउको लगाउनुस् । तेलले मालिस गर्नुस्, र कपाल धु’नु भन्दा पहिला कम भन्दा कम एक घ ण्टा अथवा रातभरी छो’डिदि नुस् । यो प्र’क्रियामा हप्तामा एक पटक वा दुईपटकसम्म गर्नुस् ।
२. कागती : कागतीको रस मि’साएर नरिवलको तेलले आफ्नो कपा ल र टाउकोमा मालिस गर्नुस् । टाउको तेल लगाएको क’रिब एक घ ण्टापछि आफ्नो कपाललाई धुनुस् । नरिवलको तेलले फुलेको कपा ल रोक्न म’द्दत गर्छ ।
३. प्याजको रस : प्याजको रस पनि कपाल फुल्ने समस्याबाट छुट कारा दिने म’हत्वपूर्ण बस्तु हो । कपाल झर्न, र तालुखुइले हुनबाट रोक्न मद्दत गर्छ । एउटा काँचको कचौरामा प्याज र कागतीको रस मिलाउनुस् । आफ्नो कपाल र टाउकोमा मालिस गर्नुस् । ३० मिने टपछि एक हल्का ह’र्बल स्याम्पूले धुनुस् । प्याजको रस चिसो हुन्छ त्यसकारण यसको प्रयोग गर्मी मौ’सममा गर्दा ठि’क हुन्छ ।
४. भृंगराज : लौकाको तेल अथवा भृंगराज (एक प्रकारको जडी बुटी) को तेल सेतो कपालको उ’पचारका अ’र्को उ’त्तम उपाय हो ।
५. तिलको तेल : कालो तिल वा तिलको तेल कपाल फुल्ने स’मस्या बाट छुटकारा दिने सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार हो । हरेक दिन एक च’म्मच कालो तिलको बिउलाई कम्पतिमा पनि तीन म’हिनासम्म से वन गर्नुस् । आफ्नो कपालमा तिलको तेलले मालिस गर्नुस् । फ’इदा हुनेछ ।
६. बदामको तेल : बदामको तेल, कागतीको रस र अमलाको रस लाई बराबर मात्रामा मिलाउनुस् । कपाल फुल्ने तथा सेता रौ भए काहरुको स’मस्याको उपचार गर्नका लागि यो मिश्रण तेलले आफ्नो कपाललाई मालिस गर्नुस् यसले तपाईको कपाल विस्तारै विस्तारै कालो च’मकदार हुनेछ।
७.लौकाको रसमा जैतुनको तेल वा तिलको तेल मिसाएर आफ्नो टाउको र कपालमा मालिस गर्नुस् । चौलाई ९एक प्रकारको हरियो स’ब्जी०को ताजा रसले कपालको प्राकृतिक रंग बनाउने, कपाल झर्न रोक्ने र कपाल फुल्न रोक्नेमा म’द्दत गर्छ।
२०७८ पुष १९, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 181 Views